बिजयजी, तपाईंले उल्लेख गर्नु भएका कुराहरु समस्याका एउटा पाटामात्र हुन, त्यसलाई अर्को पाटोबाट पनि हेर्नु पर्छ र गुण र दोष छुट्ट्याउनु पर्छ। सडके ब्यापारीहरुको कुरा गर्नु भयो, कसैले पनि सार्वजनिक स्थानलाई ओगटेर, अरुलाई असुबिधा हुनेगरी आफ्नो धन्दा गर्नु राम्रो हुन्छ र? यसो बिचार गर्नुस् त, हाम्रा सडकपेटीहरु त्यसै पनि सांघुरा छन, त्यहीमाथि फुटपाथे ब्यापारी देखी मगन्ते सम्मले ढाकेर अन्य बटुवाहरुलाई असुबिधा पुर्याउने काम् भएको छ।फेरि यो एकाएक बामदेवको दिमागको आईडिया पनि होइन,धेरै पहिलेदेखि नै नगरप्रहरी र फूटपाथे ब्यापारीहरुको लुकामारी चलिराखेको हो र बामदेवले अलि कडाइ मात्र गरेका हुन्। त्यसो त सरकाराले सबै जनाको ब्यबस्था गर्न सम्भव हुदैन तर अलि खूला ठाउँ छ भने त्यहा महानगरपालिकाले बूथ kiosk मा ब्यापार संचालन गर्न दिनू पर्छ, त्यो पनि सित्तैमा होइन, नगरपालीकालाई केहि शुल्क बुझाउने गरी। नियम कानून् भन्ने कुरो सबैले मान्नु पर्छ।
रात्री ब्यबसायीको कुरो गर्नु भयो।जरूर यसले केहीको रोजगारी खोसेको छ, तर यसले धेरैको हित गरेको छ।सबै त नहोला, तर अधिकांश यी रात्री डान्स बारहरु बेश्याब्रितीको सम्पर्क स्थान बनेका थिए। पस्चिमा राष्ट्रहरुलाई माथ गर्ने गरी नग्न न्रित्य देखाउने कुरो जायज हो? त्यस्तो लाई रोजागरी वा ब्यबसाय भन्न मिल्छ? यस्तो बिक्रितीले धेरैलाई बिगारेको छ। कर्मचारी, ब्यबसायी, युवा देखि बूढा र स्कुले ठिटाहरुसम्म तरुनीको नग्न देहपान गर्न डान्स रेस्तुरेन्ट धाउने, खल्ती रित्त्याउनेगरी रक्सि धोक्ने र घरमा गएर श्रीमतीलाई गोद्ने। अहिले धेरै श्रीमतीहरुले थोरै भएपनि सन्तोषको सास फेर्न पाएका छन्। अनि यसरी मदिरा र तरुनीमा खर्च गर्ने पैसा कमाउन अपहरण, चोरी, लुटपाट, हत्त्यामा संलग्न हुन्छन्।नरहे बाँस नबजे बांसुरी।यसरी डान्स रेस्टुरेन्टमा नियन्त्रण गर्नु नै अचुक् औषधी त होइन, तर यसले जरुर अपराधीक क्रियाकलापलाई कम गर्ने छ। रह्यो रोजगारी खोसिएको कुरो, यसले तत्कालै केही असर गर्ला, तर दिर्घाकालीन रुपमा ती चेलीहरुलाई फाइदानै गर्ने छन्। आफ्नो देह प्रदर्शन् गरेर, यौन बेचेर पेट पाल्न छोडेर उनीहरु अन्य इज्जतिलो रोजगारीमा लाग्ने छन्। दश-बाह्र बर्ष अघि डान्स रेस्टुरेन्ट थिएन भनेपनि हुन्छन र त्यतिखेर पनि हाम्रा चेलीबेटीहरु भोकै मरेका त थिएनन् नि। क्यासिनोका कर्मचारीहरुले बिरोध प्रदर्शन् पनि उदेक लाग्दो छ। देशमा कानून् छ र कानूनले स्वदेशीहरुलाई क्यासिनोमा प्रबेश निषेध गरेको छ र बामदेवले यसलाइ लागू गर्न मात्र खोजेका हुन्।देशको कानूनलाई धोती लगाएर आफ्नै नेपाली दाजुभाईको खल्ती रित्याउने र क्यासिनोका बिदेशी मालीकलाई धनी बनाउनेकाममा हाम्रा दाजुभाइहरु किन यति उद्धत्? यस्ताकुराहरुमा हामी सचेत नागरीकले सरकारलाई साथ दिनै पर्छ तर रामहरी श्रेस्ठ हत्त्या प्रकरण जस्तामा सरकारले हत्यारालाई जोगाउने काम गर्छ भने जरुर बिरोध हुन पर्छ। यदि माओबादीको नेत्रित्वको सरकारले हत्यारालाई संरक्षण गरेको छ भने बामदेव जता हक्की मान्छेले मन्त्रीपदकै लोभले लाचार बस्न सुहाउदैन।
हुन त अहिले सम्म प्रहरीको लिस्टमा फरार तर सार्बजनीक रुपमा मज्जाले हिंड्ने ब्यक्तीहरु धेरै छन्।लौडा काण्डमा अख्तियारले धूँईधूँईती खोजीएका तारिणीदत्त चटौत प्रहरीको कब्जामा कहिले परेनन। त्यसैगरी, चिरन्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, सिताराम प्रसाईहरु कहिले गिरफ्तार् भएनन्। आशा छ माओबादीको नेत्रित्वमा त्यस्ता कुराहरु नदोहोरिउन्, होइन भने जनताले कसलाई चहि बिश्वास् गर्ने?
ब्रिलियन्टम्यानजीले उठाउनुभएको बुंदाहरु एकदम जायज छन ।
रंगीन रात बिताउने मोहमा फसेका व्यक्तिहरु कस्ता हुन्छन र के गर्छन भन्ने भनिरहनु नपर्ला । गिलासबाट शुरु भएका रातका राजाहरु गन बोकेर हिड्ने डन भैसकेका छन । वेटर र डान्सरहरु रातका रानी बनिसकेका छन् । विकृति र विसंगति जति छिटो सक्यो रोकेको उति राम्रो , समयमा रोक्न नसक्दा कति बिकराल रुप लिइसकेको रहेछ र नेता देखि प्रहरी सम्म यसको लतमा फसिसकेका रहेछन भन्ने कुरा त छर्लङ नै देखियो पनि ।
पाकेटमार होस या डनहरु हुन तपाई हामी जस्ताले इराक देखि इग्ल्याण्डसम्म देखि दुखसंग आर्जेर लिएर गएको सम्पति पनि काठमाडौकै गली देखि एअरपोर्टसम्म बाटो ढुकेर बस्ने डनहरुले र रातमा मोज गर्न पल्केकाहरुले ठाडै लुटेर शराब र शबाब संग उडाइदिने स्थिति आएपछि विकृति नियन्त्रण गर्न खोज्नु जायज होइन र?
अनि बाहिर बाट रेष्टुरेण्टको बोर्ड झुन्डाएर सोझा सोझा केटीहरुलाइ गाऊं घरबाट ल्याएर झुक्याएर रातीमा नांगिने पेशामा लगाउनु र बम्बैमा लगेर बेच्नुमा केहि फरक देख्नु हुन्छ ? मेरो लागि त दुवै प्रवृति उस्तै हुन ।
केहि वर्ष पहिले एक जना लुटेराले पक्राउ परिसकेपछि पुलिसलाइ बताए अनुसार लगभग १ करोड भन्दा बढी रकम लुटिसकेका उनले सबै पैसा रंगीन संसारमा नै उडाएका थिए रे ।
त्यसैले गांजा र वेश्यावृतिमा मशहुर हल्याण्डले समेत अबदेखि विकृति नियन्त्रण गर्ने र यस्तो व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिसकेको अवस्थामा नेपालले अझै भात र म:म को नाममा चेलीहरुलाई नंग्याउदै लाने वा विकृतिलाई अहिले देखि नै नियन्त्रण गर्ने ? हामीले नै नंग्याउने बाटो रोज्छौं भने राम्रो बाटो कसले लिने? भोलि छर छिमेक हुंदै हाम्रै आफन्तहरु नांगिने स्थिति आउंदा के हामी बियरको चुस्कि र नशाले आफ्नो होशलाई दबाएर उनिहरुको नांगो नाच हेर्न सकिरहुंला?
अर्को कुरा युरोप र अमेरिका स्थितिमा देश पुग्नु पर्ने आश गर्ने हामीहरुले देशमा फुटपाथ मात्रै हैन गर्दा गर्दा मोटर गुड्ने रोडमा समेत कसैले पसल थाप्न पाउनु पर्छ भन्ने हो भने गाडि गुड्ने ठाउं र फुटपाथमा हिड्न पाउनु पर्ने हाम्रो अधिकार माग्न को संग जाने !
तपाईंको आशय अरु पनि छन गृह मन्त्रीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु भन्ने हो जस्तो लाग्छ । हो प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने धेरै कुराहरु छन तर ती काम हरु गरिएन भन्दैमा सानो तिनो राम्रो कामहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।